Guriga furan ee CACC | WSDOT
homeagency projectsOnline open housesGuriga furan ee CACC
Guriga furan ee CACC
Maadaama oo deegaanka Puget Sound uu korayo, dalabka gaadiidka cirka (safarka dayuuradaha) ayaa la koray. Saadaasha dhawaan la sameeyay waxay muujinayaan in dalab uu libi laabmi doono 2050. Taas oo ka dhigan in xataa baladhinta qorshaysan ee Madaarka Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma iyo koboca mustaqbalka ee Paine Field, inay jiri doonaan celcelis ahaan 27 milyan oo ruux rakaab ah oo aan la qaadin.
Sidoo kale, 2050, kaargooga diyaaradaha waxaa la filayaa inuu ka bato libi laaban, oo guud ahaan gaadiidka cirka, oo ay ku jiraan duulimaadyada diyaaradaha gaar loo leeyahay iyo kuwa madadaalo, duulimaadyada la kiraysto, iyo adeegyada caafimaadka iyo dab damiska, waxaa la filanayaa inuu ku koro gobolka oo dhan.
Xeerdejinta Gobolka Washington waxay abuurtay Gudida Isku Duwida Gaadiidka Cirka ee Ganacsiga (Commercial Aviation Coordinating Commission, CACC) si looga soo taliyo goob kaliya oo la doorbidayo oo madaar ganacsi oo cusub ah ugu danbayn Febraayo 15, 2023. Waxaad macluumaad dheeraad ah ka ogaan kartaa CACC iyo waxay qaado websaytkeeda.
CACC waxay qirsan tahay baahida loo qabo qaab nidaamka ah iyo korodhinta usoo jedida u adeegida deegaanka. Sanadkii lasoo dhaafay, waxa diirada la saarayay waxaa kamid ahaa khidada balaadhan oo ay ku jiraan in:
Lagaga jawaabo sadex nooc oo kala duwan oo gal daloolada awoodeed ah – diyaaradaha rakaabka, diyaaradaha kaargooga, iyo guud ahaan gaadiidka cirka – iyo xalal mid kasta baahidiisa gaarka ah lagu buuxinayo
In la geliyo talooyinka si loo yareeyo saamaynta deegaanka
Waxaa kamid ah qorshayn gobolka oo dhan ah si gacan looga gaysto gacan ka gaysiga bixinta awooda
Xaqiijinta in bulshana aanay ku yeelan saamayn xun
Horaantii sanadkan, waxa aanu ka dhagaysanay bulshooyinka ku nool degmooyinka King, Kitsap, Lewis, Mason, Pierce, Skagit, Snohomish iyo Thurston waxa mudnaan u ah ee la xidhiidha gaadiidka cirka iyo sida Gudiga iyo WSDOT (Washington State Department of Transportation) uga jawaabayso waxay u baahan yihiin.
CACC waxay doonaysaa macluumaadka shacabka ee qaababka aanu u daraasadaynayno sidii aanu sida ugu wanaagsan ugu adeegi lahayn diyaaradaha rakaabka, kaargooga, iyo guud ahaan gaadiidka cirkaee Washington. Guji halkan LINK si aad u qabato boga faalada si toos ah.
Waxaa la sameeyay CACC – Julaay 28, 2019
Lagusoo bandhigay Warbixinta Wajiga I – Diseember 2020
Waxaa lagu soo bandhigay lix (6) ikhtiyaar – Febraayo 15, 2022
Soo bandhig liis la safeeyey oo ah laba ikhtiyaar – Oktoobar 15, 2022
Waxaa lasoo bandhigay doonaa ikhtiyaarka ugu danbeeyay ee kagu teliyay Xeer Dejinta Gobolka Washington – Febraayo 15, 2023
Fadlan oggow in CACC waxay soo bandhigtaa kaliya tahay talo. Kadib marka ay xeer dejintu eegto, waxaa daruuri ah in la sameeyo qiimayn dhaqaale iyo deegaan oo faahfaahsan, iyo il dhaqaale oo maamulka madaarka ayaa ogaanaya sida loo hirgelinayo.